Suugo - Gpedia, Your Encyclopedia
Kani waa maqaal ku saabsan nooc ka mid ah cuntada.
Suugo leh khudaar iyo ukun
Noocyo kala duwan suugo ah iyo hilib xaniid
suugo iyo hilib: disdiyo suugo cas (bidix), iyo suugo karaysa (midig)
Suugo (Af-Ingiriis: sauce; Af-Carabi: صلصة) waa nooc ka mid ah cuntada taasi oo inta badan lagu kor daro bariiska, baastada, makaroonaha, canjeerada, rootida, sabaayada, malawaxa iyo wixii la mid ah. Sida la ogyahay suugadu waxay ka sameysan tahay khudaar, saliid, hilib, xawaash, milix iyo biyo la isku kariyay. Suugadu waa dareere mararka qaar khafiif ah, jaamud ama dhexdhexaad ah. Sidoo kale, suugada waxaa la cunaa inta ay kulushay, laakiin meelaha qaar waxaa la isticmaalaa suugo qaboow. Dadka khabiirka ku ah cuntada waxay diyaariyaan noocyo badan oo suugo ah, taasi oo leh midabo iyo dhadhan kala duwan. Marka la diyaarinayo suugada waxyaabaha la iskudaro ayaa inta ugu badan si xirfad leh loo kululeeyaa ka dib lagu daraa xawaash udgoon ka dhiga.
4 Suugada iyo Cuntooyin Kale
Si la mid ah shacabka caalamka, bulshada Soomaalidu waxay isticmaalaan noocyada kala duwan ee suugada. Inta ugu badan waxaa la cunaa suugada wakhtiga quraaca, qadada iyo cashada, laakiin wakhtiyadu intaas kuma koobna. Noocyada suugada ee deegaanada Soomaalida ku caanka ah waxaa ka mid ah suugo cas iyo suugo cad. Dadka Soomaalidu waxay suugada ka diyaariyaan hilib, khudaar, milix, saliid, biyo iyo xawaash kuwaasi oo si xirfad leh loo karkariyo ilaa ay gaadho heer nooca loogu talogalay ah.
suugo ukun iyo khudaar
suugo tufaax leh
Suugada iyo Cuntooyin Kale
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Suugo&oldid=171511"